Fahasamihafana eo amin'ny SEO sy ny SEM, teknika roa hisamborana ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao | Martech Zone
Talata, Aogositra 28, 2018 Kenneth Evans
Fantatrao ve ny mahasamihafa ny SEO (Search Engine Optimization) sy ny SEM (Search Engine Marketing)? Izy ireo dia lafiny roa amin'ny farantsakely iray ihany. Ireo teknika roa ireo dia ampiasaina hanangonana fifamoivoizana amin'ny tranokala iray. Fa ny iray amin'izy ireo dia akaiky kokoa, mandritra ny fotoana fohy. Ary ny iray hafa dia fampiasam-bola maharitra.
Efa fantatrao ve hoe iza amin'izy ireo no tsara indrindra aminao? Eny, raha mbola tsy fantatrao, dia hazavainay aminao izany. SEO dia mifampiraharaha amin'ny vokatra biolojika; ireo izay mitana ny toerana ambony amin'ny valin'ny fikarohana Google. Ary ny SEM dia ireo valiny hatrany am-boalohany izay voasokajy ho doka.
Amin'ny ankapobeny, ny doka dia alefa rehefa ny fikarohana dia midika fividianana fanahy iniana, na mitady vaovao momba ny vokatra iray. Ary miavaka amin'ny valin'ny organika ihany koa izy ireo satria amina marika kely milaza hoe: "Doka" na "Sponsored." Ity no fahasamihafana voalohany eo amin'ny SEO sy ny SEM ny fomba isehoan'ny valiny amin'ny fikarohana.
SEO: Paikady maharitra
Ny fametrahana ny SEO dia ireo teknika rehetra izay ampiasaina hametrahana ny pejin-tranonkala karoka Google fikarohana. Aza miraharaha ireo fampanantenana rehetra milaza aminao fa tena tsotra ny SEO ary zavatra toa izany. Noho izany, ny fahasamihafana lehibe hafa misy eo amin'ny SEO sy SEM dia ny fe-potoana ahazoana valiny.
SEO dia teknika maharitra. Ny fametrahana ny valiny amin'ny pejy voalohany amin'ny Google dia miankina amin'ny lafin-javatra maro (anton-javatra an-jatony maro azo atao).
Ny lakilen'ny voalohany dia ny fampiasana ilay teknika antsoina hoe "rambony lava." Mampiasà teny fanalahidy misimisy kokoa, miaraka amin'ny karoka kely kokoa nefa kely ny fifaninanana.
SEM: Ho an'ny fotoana fohy sy fikojakojana
Ny SEM dia ampiasaina indrindra noho ny antony roa:
Mba hisamborana fitsidihana tranokala iray hatramin'ny nanombohan'ny tetikasa iray, raha mbola tsy miseho amin'ny toerana voajanahary izahay.
Manararaotra ny fotoana rehetra, satria raha tsy araraotintsika izany dia hataon'ny fifaninanana.
Ny valiny hasehon'i Google ho an'ny "kiraro fanatanjahan-tena" dia tsy hitovizany amin'ny "kiraro tànana Nike any LA" Tsy vitsy ny hitady ny farany, fa ny fikasan'izy ireo dia tena voafaritra kokoa.
Izany no antony ampiasana ity teknika famoahana doka amin'ny motera fikarohana ity, indrindra ny doka Adwords, mandritra ny fotoana fohy hanombohana mandray mpampiasa mitsidika tranonkala, ary maharitra mba hitohizan'ny fihazonana ny tsena amin'ity sehatry ny doka ity.
Misy ny fikarohana izay manahirana be ny fisehoana amin'ny pejy voalohany amin'ny valiny. Alao an-tsaina hoe mivarotra kiraro fanatanjahan-tena ianao. Ny fisehoana amin'ny pejy voalohany amin'ny fikarohana "mividy kiraro" dia ho lasa marathon marina amin'ny fotoana maharitra. Izany dia raha ho tonga any ianao.
Tsy hifaninana intsony ianao ary tsy ho latsa-danja noho ny tena goavambe toa an'i Amazon. Tsy misy na inona na inona, alaivo sary an-tsaina hoe hanao ahoana ny fiadiana amin'ireo goavambe ireo. Eny tokoa, fandaniam-potoana sy loharanon-karena.
Izay no mahatonga ny doka raha atao mazava tsara dia manome antsika fotoana hifaninana amin'ireo olona goavambe ireo ary hanana fotoana hisehoana amin'ny karoka izay saika tsy ho vita mihitsy.
Fahasamihafana eo amin'ny SEO sy SEM
Andao jerena ny fahasamihafana miharihary indrindra eo amin'ny teknika iray sy ny iray hafa.
Fe-potoana - Voalaza fa ny SEM dia fotoana fohy, ary ny SEO dia lavitra. Na dia, araka ny efa hitanao aza, misy sehatra misy ny SEM tsy maintsy atao raha tsy te ho very fotoana mety hisarika ny mpanjifa ianao. Hatramin'ny nanamboaranay ny fampielezan-kevitray sy "omenay ny bokotra," dia hanomboka hiseho izahay amin'ny fikarohana ataon'ny mpampiasa an-jatony na an'arivony (eny, miankina amin'ny teti-bolanao izany). Na izany aza, raha te hiseho amin'ny vokatra biolojika dia ilaina ny asa mandritra ny volana maro, na an-taonany aza, hahazoana toerana kely. Raha ny marina, rehefa vaovao ny tranonkala iray dia voalaza fa misy vanim-potoana izay mbola tsy itondran'ny Google anao matotra, izay mazàna enim-bolana eo ho eo. Ary na manao asa tsy manam-paharoa ianao na firy na firy ianao, dia handany vola amin'ny fisehoanao amin'ny pejy voalohany amin'ny motera fikarohana mandritra ny volana vitsivitsy. Io ilay fantatra amin'ny anarana hoe "Sandbox" an'ny Google.
Vidiny - Ny vidiny dia fahasamihafana iray hafa eo amin'ny SEO sy SEM. Voaloa ny SEM. Manapa-kevitra ny teti-bola hampiasam-bola izahay, ary ampangaina aminay isaky ny tsindry atao amin'ny doka izahay. Izany no antony iantsoana ireo fampielezan-kevitra ireo hoe PPC (mandoa isaky ny kitiho). Maimaimpoana ny SEO; tsy mila mandoa olona ianao hiseho amin'ny valiny. Na izany aza, ny vola lany amin'ny ora sy ora niasana matetika dia avo kokoa noho ny an'ny SEM. Ireo toerana biolojika ao amin'ny motera fikarohana dia tsy tokony hamboarina. An-jatony ny masontsivana sy masontsivana tokony ho raisina raha misy pejy hiseho alohan'ny na aorian'ny olon-kafa. Fitsipika sasany amin'ny lalao izay tsy maintsy fantatrao, ary tokony hitandrina tsara ianao mba tsy hanandrana hanova mba tsy hijaly sazy. Ny voalohany dia teknika hanodikodinana ireo algorithma (indraindray aza tsy etika), ary ny faharoa dia ny miasa mba hahazoana toerana ambony, fa ao anatin'ny fitsipiky ny lalao.
Ireo toerana ao anaty motera fikarohana - Ao amin'ny SEM, ankoatry ny fibodoana ny laharana voalohany amin'ny valiny, azonao atao ihany koa ny mampiseho doka amin'ny faran'ny pejy: Ny SEM dia mibodo hatrany ny fiandohana sy ny faran'ny pejy, ary ny SEO dia mibodo hatrany ny tapany afovoan'ny fikarohana vokatra.
Teny lakile - Ireo teknika roa ireo dia mifototra amin'ny fanatsarana ny teny lakile fa manana fahasamihafana lehibe eo amin'ny fifantohana rehefa manatanteraka ny paikady ho an'ny iray na ho iray hafa isika. Na dia misy fitaovana samihafa aza ho an'ny SEO sy SEM, ny mpandahatra ny teny lakile an'ny Google dia matetika ampiasaina amin'ny roa hanombohana ny fandrafetana ny tetika. Rehefa mikaroka teny lakile izahay dia averin'ny fitaovana ilay teny rehetra mifandraika amin'ny lohahevitra voafantina, ary koa ny habetsaky ny fikarohana isam-bolana ho an'ny tsirairay, ary ny fahasarotana isaky ny teny lakile na ny haavon'ny fahaiza-manao.
Ary eo no misy ny fahasamihafana goavana eo amin'ny SEO sy SEM:
Mandritra ny SEM dia arianay ireo teny lakile izay misy karoka kely, SEO dia mety hahaliana satria ny fifaninanana dia ambany ary hanafaingana ny fizotry ny fametrahana amin'ny fomba voajanahary. Ary koa, amin'ny SEM, dia jerentsika ihany koa ny vidiny isan-tsindry ny teny tsirairay (manondro izany, fa manome antsika ny hevitry ny fifaninanana misy eo amin'ny mpanao dokam-barotra), ary amin'ny SEO dia mijery masontsivana hafa toy ny fahefan'ny pejy izahay. .
Tags: fikarohana biolojikafikarohana karamadinika |fikarohana OptimizationSearch Marketingsemsem vs seoSEOseo vs sem
Kenneth Evans dia tetikady iray momba ny varotra atiny Orinasa fampiroboroboana fampiharana ambony, sehatra fikarohana ho an'ireo orinasam-pampandrosoana fampiharana any USA, UK, India, UAE, Australia ary manerana an'izao tontolo izao. Nandray anjara tamin'ny sehatra bilaogy samihafa sy Forum maro izy.